किशोरीमा महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु राम्रो लक्षण हो, महिनावारीको समयमा के गर्ने – के नगर्ने ? – Halkhabar kura
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:५९
किशोरीमा महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु राम्रो लक्षण हो, महिनावारीको समयमा के गर्ने – के नगर्ने ?
डा. नुतन शर्मा-किशोरी अवस्थामा समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन्। किशोर अवस्था महिलाका लागि संवेदनशील समय पनि हो। यो बेला शारीरिक र मानसिक सबै खाले परिवर्तन हुन्छ। यो अवस्थामा शरीरका बिभिन्न अंगमा समेत परिवर्तन आउँछ। शरीरमा जुन खालका परिवर्तन आउँछन् त्यसले थुप्रै खालका समस्याहरु समेत निम्त्याउने गर्दछ।
शारीरिक समस्या- महिनावारी हुने बेलामा धेरै पेट दुख्नेगर्छ। महिनावारी बारे आवश्यक ज्ञान नहुँदा किशोरीले असजिलो महसुस गर्नुका साथै अफ्ठेरो अवस्थाको समेत सामना गर्नुपरेको हुन्छ। प्रायःकिशोरीहरुमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्ष सम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइँदैन। महिनावारीको समयमा कहिले– कसैलाई धेरै रक्तश्राव भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई कम रक्तश्राव हुने गर्छ। तर, यो सामान्य प्रक्रिया हो। झण्डै चालिस प्रतिशत किशोरीमा यस्तो समस्या देखापर्छ।
यदि ४–५ दिन भन्दा बढी समयदेखि लगातार रक्तश्राव भइरहेको छ, दैनिक ३–४ वटा भन्दा बढी प्याड प्रयोग गर्नु परेको छ र आफ्नो नियमित काममा समस्या भएको छ भने यस्तो बेलामा तुरुन्तै बिशेषज्ञ चिकित्सक कहाँ पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक परामर्श लिनु जरूरी हुन्छ।
महिनावारीको बेला पेट दुख्दैमा आत्तिहाल्नु पर्देन- महिनावारी भएको बेलामा पेट दुख्नु सामान्य लक्षण हो। यस्तो बेलामा किशोरीहरू धेरै पेट दुख्ने समस्या लिएर आउने गरेका छन्। किशोरी अवस्थामा महिनावारी हुँदा पेट दुख्नु नराम्रो लक्षण होइन। डिम्बाशयमा अण्डा बनेर फुट्ने क्रम चलिरहेको कारणले गर्दा पेट दुख्छ। जुन महिनामा अण्डा बन्ने र फुट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो महिनामा बढी पेट दुख्ने गर्छ।
मोटोपना र दुप्लोपना दुवै समस्या- धेरै मोटोपना र दुव्लोपनाका कारणले पनि महिनावारी नियमित नहुने समस्या हुन्छ। यस्ता समस्या भए तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्दछ। हिजो आज यस्तो समस्या सामान्य भइसकेको छ। खास गरि अस्वस्थकर खानपान, नियमित व्यामको कमी, निस्कृय जीवनशैली जस्ता कारणले पनि किशोरीहरुमा मोटोपनाको समस्या बढेको पाइन्छ। शरीरका लागि धेरै मोटोपना र दुव्लोपना हुँदा महिनावारीका बेलामा समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा थाइराइड र रगतको जाँचका साथै भिडियो एक्सरे गरी आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थावारे जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ।
सरसफाइको अभाव- खास गरि महिनावारीका समयमा किशोरीहरुले आफ्नो सरसफाइमा बिशेष ध्यान नदिदा विभिन्न समस्याहरु निम्तिने गर्छ। महिनावारीको समयमा गुणस्तरयुक्त सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। तर हाम्रो आर्थिक अवस्था, सहज पहुँचको अभाव, र चेतनाको कमी, लाज मान्ने प्रवृति जस्ता कारणले कतिपय किशोरीले यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरसफाईमा त्यति ध्यान दिएको पाइदैन।
किशोरीको अस्थिर समय- यो समय किशोरीको लागि अस्थिर समय हो। उनीहरू शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्थिर हुन्छन्। यो उमेरमा कतिपय किशोरीहरु केटा साथी बनाउने र शारीरिक सम्पर्क समेत गर्ने गर्छन्। आकस्मिक रुपमा गर्भवतीसमेत बन्न पुग्छन् यो समस्या उनीहरुले आफ्ना अविभावकलाई भन्न सक्दैनन्। उनीहरुले लुकाएर औषधि खान्छन्। जस्ता पायो त्यस्तै ठाँउमा पुगेर गर्भपतन गराउने प्रयास गर्दछन् त्यसले भविष्यमा निकै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। असुरक्षित गर्भपतन महिलाको स्वास्थ्यका लागि निकै ठूलो समस्या बन्न सक्छ। जहाँ पायो त्यहाँ असुक्षित गर्भपतन गराउँदा अत्याधिक रक्तश्राव भएर महिलाको ज्यान गएका समेत घटना सुन्ने गरिएको छ।
प्रश्तुतीः सन्जिब बगाले/सेतोपाटीबाट
Previous मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, अझै खाली पेट
Next मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार, प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न थाल्यो